1998kii ayuu C/Laahi xaar-xaartay 5.gobol oo ugu walqalay Puntland, Magacii uu raadintiisa bilaabay 78kiiina halkaas ayuu ka helay, waa Madaxweynaha D/G/P. Sadax sano oo doorasha ah ayaa u dhamaatay, kadibna iyadoo muruq ah ayaa hadana loogu yeeraa Madaxweyne.
Waxaase wax walba iiga daran oo aan illaawi la’ahay Axadda aniga oo lacagta oo dhan u soo diray ayaan subaxa Isniinta la soo hadlay sii aan u hubiyo inuu lacagti helay iyo inkale taleefanki wuu xirtay baraaha aan ku xiriirin jirnayna Block ayuu iga saaray.
Apr 30, 2014 · Dhegaa, Meesha jacdii iga raacday, dhalinta waxa weheliya Xaaji da'a ahaan ka wayn, balse maskax ahaan si fiican layskula haystoo, inkasto aanu sidooda u labisnayn, hadna sheekadu way iskugu jirtaa, Anigii ayaa lay faquuqay, Midab iyo Luuqad toona maaha, ee Waa labis iyo Sheeko ahaan, Ninka weyni anaga iyo Hablaha isku si ayuu noogu sheekayna ...
Xitaa haddii aad iga qaadeen ilaalada, Allah ayaa iga ilaalin doono waxyeelo kasta,” ayey Canab ku tiri qoraal ay maanta soo dhigtay facebook. “Cidna ima cabsi gelin karto, imana qasbi karto. Waa la I heli karaa, waxaana la ii yeeri karaa waqti kasta oo toddobaadka ka mid ah, balse ma ogoli cabsi gelin iyo gacan maroojis.
Nebi Aadam C.S waa qofkii ugu horeeyay ee uu ilaahey abuuray waxa uuna ka abuuray dhoobo, xaawana uu kasiii abuuray feerta bidix ee Aadam, wuxuu noolaa ilaa kun sano, waxaana lagu duugay Abuu Qabiis.
27 oo intaas oo dhan ayuu saaray Haaruun gacantiisii, iyo gacantii wiilashiisa, oo sida qurbaanka la ruxruxo ayaa Rabbiga hortiisa lagu ruxruxay. 28 Kolkaasaa Muuse gacmahoodii ka qaaday oo wuxuu qurbaankii la gubayay kula dul gubay meesha allabariga, oo waxay ahaayeen quduuskadhigidda oo caraf udgoon loo bixiyo.
Dec 20, 2018 · Aniga waxaan ahay (wiil 16, sanno jir ah) waxaan maanta galmo la sameeyay saaxiibtayda waxaana dhaawac gaarsiiyay xubinkayga taranka. Wuu jabay waxaana maqlay cod jabitaan ah. Hadda wuu bararsanyahay midabkiisana waa buluug. Aad ayuu u xanuunayaa. Miyuu iga jabay?
Sep 16, 2014 · Markuu Arkay ayuu inta istaagay wuxuu ku yiri, "Waxaan wataa, Falaaro badan, waana og tihiin in aan ahay kan Idin kugu shiishka badan, markii Falaaruhu iga dhammaadaanna Seefta ayaan ku dagaalamayaa!". Wuxuu yiri, Labo Arrimood mid doorta, "In aan xoolahayga Idin siiyo oo iga hartaan iyo in aan iska kiin difaaco?".
Dabada iga wasi jiray facebook. Naag La Wasay Siilka ayuu arkay. Wasmo, raaxo sheeko ku sabasan kacsi naag iyo nin is wasaya xaax dhilo siil Gus soo qor hade haysato Dabada iga wasi jiray facebook. 13 हज़ार पसंद. Dabada iga wasi jiray facebook ; Dabada iga wasi jiray facebook ; Siilka iga wasay.
Mar 31, 2017 · Howlgalkeena Korinta . Inaanu ku meelayno inta ugu badan ee xayawaanka caafimaadka qaba, guryo joogto ah sida ugu macquulsan. Si loo dhamaystiro howlgalkeena waxaynu, baari doona caafimaadka xayawaanka, dabeecadda iyo haboonaanta ku meelaynta guryaha, si loo helo milkiilayaasha haysta xayawaanka kuwaas u dhigma, la baro milkiilayaasha waxyaabaha ku saabsan sharciyada iyo xukummada ay ka mid ...
Horay ayuu u qaatay buugaagta dugsiga si uu masjidka ugu soo akhristo casharadii uu manta soo qaatay maadaama guriga ay joogaan caruur badan oo uusan waxba ka akhrisan kareyn. Maqrib iyo ceshe ayuu masjidka kusoo qaatay waxa uuna usoo dhaqaaqay xagga guriga oo aan ka fogeyn masjidka.
Apr 08, 2014 · Tirakoobyada la soo saaray sannadkii 2012, waxay kor u dhaafayeen bangiyada islaamiga ah 500, waxana ay intaasi ku gaadheen muddo 30 sannadood gudahood ah. Waxa kale oo jirta bangiyo aasaas ahaan ahaa kuwo ribawi ah, balse markay arkeen koboca bangiyada islaamiga ah furay adeegyo bangiyo islaami ah, sida city Bank, HSBC.
Silsiladda Taariikhda Islaamka. Qaybta 5aad: Habnololeedka Guud Ee Nabiga (scw) Nabinnimada Kahor. Dhinac walba oo laga eego Nabigu (scw) wuxuu ahaa shakhsi heerka ugu sareeya ka gaaray hoodada qof lagu ammaano, wuxuu ahaa moodal sareeya oo dhamays tiran laga haqab tiray figradda toosan iyo aragtida toolmoon, wuxuu nasiib u helay gabal wayn garashada wanaagga, ka baaraan dagidda talada ...
May 28, 2012 · Gareth Barry Oo Laga Saaray Xulka England Ee Euro 2012 Iyo Phil Jagielka Oo Lagu Bedelay May 28, 2012 Leave a comment Gareth Barry ayaa seegi doona ciyaaraha Euro 2012 ee xulkiisa uu ka qeybgalayo ka dib dhaawac soo gaaray, waxaana booskiisa lagu bedelay daafaca Phil Jagielka.
Ayuu iweydiyey! Waxaan kujawaabo ayaan garanwaayey. Waxaan dib ugu laabtay odaygii bukaanka ahaa. Indhihiisa ayaan eegey anigoo quudinaya, waxaan yaqiinsadey in la’ii soo direy oo ay meeshan arin ka socoto. Runtii, jawaabta uu ninka iweydiyey waxa iga hortaagan waa cabsi… ma’ahan cabsi inay wax igu dhacayaan… ee waxaan kabaqaya runta !
Shalay oo ay hayd 08/11/ 2018, waxay ku beegnayd maalintii Alle naxariistii janno ha ka waraabiyee geeridii madaxweynihii koowaad ee jamhuuriyada Somaliland, Mudane Cabdiraxmaan Axmed Cali, …
iyo maalmo ayaa Alle iga soo daayay gacantii cadawga maalin Axad ah 6/2/2002EC (Taariikhda Itobiya). Kadib waxaan go’aansaday inaan iskaga tago dhulkan oo uuna amaan iiga suuroobahaynin. Waxaana u soo bandhigay inamo aan saaxiibo nahay laakiin badh ka mid ah ayaa si ula kac ah iigu diiday inaan ka baxo wadanka, sidii ayaana ku nagaaday
Apr 29, 2020 · (ERGO) – Qaar ka tirsan goobaha ganacsiga ee xeryaha qaxootiga ee Dhadhaab ayaa labadii toddobaad ee la soo dhaafay u xirmay hoos-u-dhac dhaqaale oo ka dhashay mamnuucista isu-socodka dadka uu kala safra gobolada Kenya, taasoo qeyb ka ah tallaabooyinka lagu xakameynayo faafista cudurka Koroona.
Ninkii maqaayadda joogay ayaa yiri, “ninyahoow aniga walligeey hoos uma eegin nimcadaa illaahay inagu manneeystay, awal wax micno weeyn ah iima sammeeyneen, balse hadalkaaga wax weeyn ayuu iga badalay.” Ninkii maqaayada joogay ayaa ugu danbeeyn ninkii weeydiiyey inuu qurbaha dib ugu noqnayo iyo in kalle.
DAAWO Waan u Fooraarsan Jiray Isagana Waxa uu Guska Iga Masixi Jiray Siilka ILaa Dabada Ilaa aan Ku Waasho Kalmada ah Igali… Daaawo Deeqa ladan :- Dumaashigay ayaa iga codsaday in aan Gacanta Biya uga keeno lakiin si toos ah ayuu
Apr 17, 2017 · Rakaabkii naxdin baa la soo kodoshay, oo qof kasta sidii baraf meel bcad la dhigay oo kale ayuu u shiilmay. Wiil yar oo da’da 16-aadka ayaa albaabka gaariga soo istaagay, kadibna intuu qorigiisa AK47 oo u garaarsanaa u furtay ammanka, ayuu farta saaray keebka. Si jeesjees ah ayuu Rakaabkii ugu yiri:- ‘Qof kasta ha soo dego’.
May 17, 2020 · Madaxweyne Mustafe Cagjar Oo Cadaadis Lagu Saaray Inuu Is Casilo Iyo Sababta Kaliftay Madaxweynaha Dawladda Deegaanka Soomaalida, Mustafe Muxumed Cumar ayaa qirtay in Dawladda Federaalku ay ku amartay inuu iska casilo xulka madaxweninimada DDS ee uu muddada labada sannadood ku dhow hayey.
Sep 24, 2009 · Inta aan xaaska guriga joogo ahaa, waxaa damcay in aan raadiyo xaaladda reeraheena, laakiin intuu dareemay ayuu I saaray cadaadis badan, la iima ogoleyn in aan guriga ka baxo oo markii uu guriga ka baxaayo wuxuu igu xiri jirey silsilad weyn deriska wuxuu ugu sheekeyn jirey in aan ahay naag saaqidad ah oo isaga diideysa uuna aabaheey igu daray ...
Laakiin kulankii xalay ka dhacay Villa Somalia ayaa meesha ka saaray rajo kasta oo laga qabay in qoor qoor dib ugu soo laaban doono dhex dhexaadnimo iyo inuu ka baxo gacanta Villa Somalia, mana cadda sida ay mucaaradka ugu kalsoon yihiin talaabo kasta oo ay qaadaan mustaqbalka.
Markaas ayuu igu yiri maxey tahay arinta aad sheegeyso sxb arin sidaas u sii buuran ma ahan waxaan kaa rabaa in aad igu caawiso hal arin oo kaliya waxeyna tahay waxaan halkaan ka shukaansaday gabartan oo aad maalin dhaweyd igla hadleysay msn keeda adigana sida aad iisheegtay waxaad igu tiri waa wiil qofka meesha ka kacay aniga oo tuhun weyn ...
May 23, 2011 · intuu dhiniiciisa midig eegay ayuu ku yiri nin ag fadhiyay ” Inta ay ciyaaryahankaas beddelayaan may kan dharka madmadaw sita badalaan, oo aan isagu marnaba taaban banooniga halka ay ka badalayaan caayaartoogaas “!! wuxuuna kan dharka madmadaw ula jeeda garsooraha cayaarta . Sheeko:Laba Doqon oo is Dhashay
Nov 24, 2020 · Antoine Griezman ayaa daboolka ka qaaday inuu si cad u diidi doono inuu timihiisa jaro xataa haddii ay kooxdiisa Barcelona ka dalbato. 29 jirkan reer France ayaa xirfaddiisa waxa uu caan ku ahaa inuu inta badan timaha la baxo, waxaanu taas sii waday markii uu Barcelona kusoo biiray sannadkii 2019kii oo uu Atletico Madrid ka yimid.
Sep 21, 2020 · DHAMANTIIN SALAAN QAALI AH IGA GUDOOMA DHALINTA RAYIGODA SO GUDIYEY. Marka Hore Madaxweyne Saciid Abdullahi Maxamed Danni waa Madaxweynaha Dawalada Puntland waxay kakobantahay 9 gobal & Degmoyin Farabadan mudo 23 sano ku dhoow ayey haysatay Maamul Tanaad ah1500KM Dhulka Balacisu dhanyahay,oo leh 2 Badood mida Hindiya iyo tan Cas Dadka dhulkas kunool 5 millyan ayuu garaaya,marka laga rebo ...
Jun 24, 2014 · Danbi kama dhaco buuraha! Qisadan ‘No Crime in the Mountains’ waxaa qoray qoraa Maraykan ah oo lagu magacaabo Raymond Chandler. Raymond waxa uu caan ku ahaa qorista sheekooyinka ku saabsan dambiyada ‘Detective stories’.
Signal strength indicator for the esp8266
Deegaanada Puntland waxaa la geeyaa dharka Huudheyda ah oo ka qiimo jaban dharka kale, waxaana inta badan laga keenaa dalalka Carabta. Lama oga sida uu dhaqangeli doono amarka kasoo baxay Taliyaha Booliiska Puntland ee la xiriira joojinta ka ganacsiga Dharka loo yaqaan Huudheyda oo ay ku tiirsan iibinta dharkaas qoysas badan.
Dec 02, 2020 · Xildhibaan Indho Indho oo ka Tirsan Golaha Guurtida Somaliland ayaa waxa fursad loo siin waayay in uu ka hadlo dood uu qabay Kadib Kulan ay yeeshen Golahaasi. Xildhibaan Indho Indho ayaa Yidhi &#82…
March 5, 2015 Hargeysa (Cadceed) – Suldaanka Yibraha Oo lagu Caleemo Saaray Hargeysa. Hargeysa()_Munaasibad si ballaadhan loo soo agaasimay oo lagu caleemo saaray Suldaan Ibraahin Cabdi Huseen oo ay yeelaneyso Beesha Yibraha ayaa maalintii shalay lagu qabtay magaalada Hargeysa.
送料無料 中古 ブランド リクロ reclo レディース 女性。ルイ·ヴィトン LOUIS VUITTON マンハッタンPM モノグラム ハンドバッグ PVC レザー 茶 M40026 【レディース】【中古】【送料無料】,【超歓迎即納】 新発売の爆買い！
40 000 makiinadaha dharka qalajiya oo cilad looga baqayo ... haddaba kuwii ugu horreeyay waxaa la soo saaray sanadkii 2004 marka wakhtigooda waxaa la dhaafay xilli hore, ayuu yiri Håkan Blom oo ...
Intaas waxaa xigay in islamarkiiba darbiga wajiga la ii saaray,” ayuu yidhi. Zac wuxuu sheegay in dhammaan ardayda jaamacadda la weydiiyo kaararkooda aqoonsiga marka ay albaabka galayaan. “Ma jirin wax wadahadal ah oo na dhex maray.
Sep 28, 2012 · Safarku markuu noo dhammaaday, ayaa wasiirka M. Sh. Cusmaan iga codsaday in qoraalkaas oo garaacan, dhawr nuqulna laga sameeyay loo diyaariyo si uu madaxweynaha ugu geeyo. Xoghayntiisa wasaaradda ayuu xilka makiinad garaaca iyo farsamada u saaray, aniga isku dubbaridka kama dambaysta ah ayuu ii diray.
Arbaco, March 02, 2005 (HOL) @18:00GMT: C/llaahi Shiikh Xasan oo ka mid ahaa Wafdigii Xaqiiqo raadinta, dhowaana lagu xiray deegaanada Puntland ayaa maanta shir jaraa'id ku qabtay Hotelka Saxafi International ee magaalada Muqdisho, kaasi oo uu ku faah faahinayay gunta hoose ee wixii lagu xiray, isagoo sidoo kalena soo bandhigay Kaarto Mileteri oo ay diyaariyeen Saraakiil Soomaaliyeed oo ay ...
C/kariin ayuu iga soo dhex galay isagoo igu yiri “Xagee iga aaday, maxaad ii dishay, xagee igu ogayd” isagoo sii daba dhigay su’aallo badan oo aan garan waayay, si saxariir ah ayaan ugu war celiyay iyadoo su’aalahaas is daba jooga ah aan fahmi waayay. Mudo kaddib ayaan ku iri “Waa anigaan kuu soo noqday mar dambana kaa tegimayaayo”.
Qof kasta ha aqriyo Qisadan, gaar ahaan Ardayda Qalin jabisay ee Shaqo doonka ah. Wiil dhalinyaro ah ayaa shaqo Maamule shirkad weyn ka codsaday. Wuxuu interview u soo hor fariistay Agaasimihi Guud oo CV-gisa ka ogaaday in natiijada waxbarashadiisi sareysay.
Habeen habeenada ka midda ayuu arinkani iga gaadhay meel culus oo aanan qaadi Karin , waxa aana goostay in aan habeenkaas oo dhan khamri cabo ilaa aan ka dhimanayo. Sidii aan khamrigii u cabayay ayaan dhacay, waxa aanan ku riyooday riyo cajiib ah, riyaadaas oo badashay nolashaydii oo dhan.
Dhibka Ay Leedahay Siigada Siigada dumarka dhibka ay leedahay cashar xiiso leh. Jooji in aad ka murugooto kuwa wax ka sheega noloshaada! Had iyo jeer waxaa jiraya qof aan fikrad ka haysan dhibka aad u soo martay si aad u gaarto halka aad joogto maanta 3.
Jaime dib u ahaa daqiiqado gudahood, seef dib-u-cap. Oo wuxuu ku qadaadiic ah ee ninkii hudheelkii lahaa, kuwaas oo u soo qabateen wax yar ka dhayin. Ka yar Brienne suxulka Jaime saaray gacanta iyo iyada gano, xagga qolalka gaarka loo leeyahay. "Waxaad Waxba kama ay layn isaga," ayay tidhi marka albaabka la xiray iyaga gadaal ka.
Sayidkayga ayaa iga carooday, wuxuuna igu dhuftay dharbaaxo daran, isagoo igu yiri: maxaa hadalkan kaa galay, u noqo shaqadii aad gacanta ku haysay. Ma aanan maqlin halkan danbe jeer ay i qabato wax la moodo qandho, sidoo kalena waxaa igu dhacay jiri-raco ilaa aan ka cabsaday inaan ku-kor-dhaco sayyidkayga.
Dadka Soomaaliyeed waxaa heysta qaar kamid ah xaaladaha noloeed ee ugu adag adduunka. Malaayiin ayaa dadaal ugu jirta sidii ay ula qabsan lahaayeen cawaaqibkii ka dhashay abaarta. Amni darradu waa xaqiiqo nololeed oo heysata qof kasta. Sanadka 2017ka wuxuu soo maray xilliyo badan oo aad u khatar badan, oo ay kamid ahayd qarixii khasaaraha ba’an geystay ee 14kii Oktoobar kaas oo galaaftay ...
1 day ago · DEG-DEG: Edinson Cavani Oo Ganaax Kulamo Ah Dusha Laga Saaray Kadib Qoraalki Cunsuriyada Ahaa Ee Uu Ku Kacay; Madaxweyne Farmaajo oo TV ka daawaday Ciyaartii Galmudug iyo Banaadir (Sawirro) Madaxweyne Farmaajo Oo Ka Fal Celiyay Ku Guulaysigii Gobolka Banaadir Ee Koobka Maamul Goboleedyada Somaliya, Fariin Ayuu Diray.
Qabiilka Dir ... Qabiilka Dir